Nguva Yekupinza Bhizinesi Rako
Usati waisa iwe unofanirwa kufunga nezve yako mamiriro, izvo zvaunogona kufunga ndizvo zvaunoda kuchengetedza. Kana iwe uine zvinhu zviri panjodzi, unofanirwa kutanga ipapo. Mukuona kwemunhu ane chikwereti, chero chinhu chauinacho chinhu chakakosha. Imba yako, maakaundi ebhengi, maakaundi ekudyara uye chivakwa zvinogona kutarisirwa kuzadzikisa zvisungo zvebhizinesi. Kuganhurira yako yemunhu chikwereti chinhu chekutanga chinhu chekuisa. Kuwedzera kunokupawo mukana wakazara wezvemari kwaunogona kubatsirwa kuburikidza nekudzikisa mutero uye chengetedza yakawanda yemari yaunoita. Izvi zvinofanirwa kuyerwa zvine hungwaru nerudzi rwebhizinesi rauri kuita mariri.
"Kunzwisisa zvikumbaridzo zvakakosha. Mari, mutero uye chikwereti zvese zvinoita basa rakakosha kuti riini kuronga bhizinesi rako."
Zvibvunze mimwe mibvunzo; Iwe uchave uri kufumura yako pfuma kuburikidza nenjodzi bhizinesi indasitiri, senge zvinhu zvine njodzi kana kuvhura musuwo kune mumwe munhu achikuratidzira kune chinzvimbo chakadai sekuhaya vashandi? Ndedzipi mhando dzebhizimusi mari dzauchazoita mushure mekupinza? Ine bhizinesi rako here, kana kuti richava naro munguva pfupi iri kutevera, rine zvivakwa senge mota kana michina? Just mumienzaniso iri pamusoro iwe unogona kutanga kuumba mabhenefiti ekubatanidza.
Kupinza Rutivi Bhizinesi
Pano tichaongorora muenzaniso webhizimusi diki rakatanga senge "rimwe basa repadivi" uye ndeapi makiyi akakosha anotungamira mukubatanidza bhizinesi.
MUENZANISO: Mike mushandi wenguva yakazara wetiraki yekumisa rori uye anoisa makiti uye anogadzira zvigadzirwa zvetsika dzemotokari. Kazhinji kacho anokumbirwa kukweretesa hunyanzvi hwake kune akakosha mapurojekiti, akadai semarori erudzi, kuvaka mabhomba, roll matangaji uye makomo ezvinyoro zvehurongwa hwesisitimu. Anoita izvi panguva yake yemahara achishanda nechikwata chemutengi wake, achishandisa maturusi avo nenzvimbo dzekushandira. Parizvino arikuita zviuru zviviri zvemadhora pamwedzi achishanda kupera kwevhiki uye panguva yemujaho anoshandisa akati wandei husiku husiku achibatsira zvikwata, achimupa masevhisi. Mike anofunga kuti haafanire kuisa zvakadaro.
Mike anoti mari inobhadharwa pamutero wake wega, zvisinei haana kubvisirwa bhizinesi sezvo ari kungopa masevhisi uye haadi zvekushandisa kana maturusi, senge zvinhu zvekunamatira uye macomputer. Mike haana kuroora uye anoroja furati uye ane mashoma zvinhu zvake. Mari yake kubva kumapurojekiti ake epadivi ingangoita kota yeakazara basa rake mari. Basa raMike harimuise pachena kune yekukuvara mamiriro kana chigadzirwa chigadzirwa, saka njodzi yake ishoma. Mune ino kesi, zvinogona kuve mukufarira kwaMike kuramba ari wega muridzi uye obvunza yake yemari mari parutivi nezvishoma kana pasina zvakatemwa zvebhizinesi zvakatemwa.
Isu tinogona kuenderera nemuenzaniso mumwe chete uye kuratidza bhizinesi raMike richikura mukati megore. Iye zvino atenga zvekushandisa zvake, tirera yekuitakura uye rori yekudhonza maturusi ake. Bhizinesi rake rava nepfuma. Uye zvakare, Mike ari kuita mari yakawanda uye achifunga kubvumidza yake yega nzvimbo kuitira kuti vatengi vake vagomuunzira mota kwenguva yakati rebei kuti aite basa rake rekugadzira. Mike ari kufunga zvakare kutsvaga mubatsiri chikamu-chenguva. Uku kuyambuka chikumbaridzo uko kubatanidza kunofanirwa kuve nhanho inotevera. Mike ave kuwedzera bhizinesi rake mari uye mari. Iyo nzvimbo yaakakweretesa uko vatengi uye vanhu vanounza varipo nguva dzose zvinomuisa pachena iye kuzviitiko zvega zvekukuvara. Kuhaya mushandi kunoreva kuti chero chinhu chinoitwa nemushandi wake akamirira bhizinesi, Mike ndiye anoitisa. Ichi chikwereti chinoreva kuti ikozvino nguva yekuisa. Iye zvino Mike anorayirirwa kuti amboronga bhizinesi rake pasi pechinhu chakabatanidzwa kuitira kuti apatsanure mamiriro ake kubva pane rake bhizinesi.
Mike angadai akatanga muridzi wega uye kukura kwake kunotungamira kuzvikumbaridzo zvinoratidza kuti apinze bhizinesi rake. Dai zano rebhizinesi raMike raizotanga chikamu chenguva, kutora michina uye maturusi zvishoma nezvishoma, wobva watsvaga nzvimbo wotora yake yekugadzira yakazara-nguva, anogona kunge aida kuisa pakutanga bhizinesi rake. Izvi zvinovhura musuwo wekuwedzera mabhenefiti. Dai Mike aizohaya kana kubhadhara chidimbu chemidziyo, bhizinesi rake richisanganisirwa makore x angave ari bhenefiti pakuve neyemabhizimusi kiredhiti kadhi iri kuvambwa, zvichimuwedzera kumuparadzanisa neiyo yebhizinesi rake. Kuganhurira chikwereti chake zvakanyanya.
Kutanga-Kumusoro Bhizinesi Kubatanidza
Mumwe muenzaniso mamiriro ndeye bhizinesi rekutanga-iro manejimendi manejimendi manejimendi ane hurongwa hukuru hwekukura uye kunyange kutengeswa kwebhizimusi uko kubatanidza kuri muchirongwa kubva pazuva rekutanga.
MUENZANISO: Deanna ibasa repamutemo muridzi webhizinesi diki uyo anobatsira vamwe varidzi vebhizinesi kuchengetedza kwavo kwemakambani. Iye anochengeta zvinyorwa zvemakambani, mabhuku eminiti uye zvinyorwa zvemutemo zviri padanho renzvimbo yemutengi yemuno. Bhizinesi rake rakavakirwa pamabasa eparamende achishandisa mawoko-enzira apo kwaanogona kubata zvese zvevatengi vake zvinyorwa zvinodiwa kuburikidza nemahofisi ake emabhizimusi nevashandi. Anofunga kugadzira web-based software inogonesa vatengi vake kuti vape ruzivo kune software system iyo ichagadzira gwaro repamutemo kwavari ravanotora. Zvino kusvika kwaDeanna kuri pasirese, kuburikidza neInternet, uye musika waanotarisira iye zvino unosanganisira bhizinesi rese rakabatanidzwa munyika.
Deanna anounza kunze vanachipangamazano mubhodhi kufambisa bhizinesi modhi uye technical solution. Iye anosarudza kuti bhizinesi iri rine mukana wakakura wemari uye riri kuzotsvaga varairidzi kuti vaendese kambani kumberi nekuunza tekinoroji iyi kumusika. Kushanda nevarairidzi vake, bhizinesi modelling inoitika pamwe nekuongorora bhizinesi mukuvandudza software. Iye anobva atoda kuisa bhizinesi. Ari kutarisira kuve nevashandi vevanhu makumi maviri nevaviri mukati memwedzi gumi nembiri yekutanga, yekuhaya nzvimbo yemahofisi nemidziyo uye kudzorera varidzi kune avo mari panguva yekutanga bhizinesi iri.
Aya ndiwo mamiriro anotenderwa kusanganisa. Zvirongwa zvebhizinesi iri uye nemari inodikanwa kungo ratidza bhizinesi modhi inoita mutengo wekuronga zvebhizimusi muchikamu chakabatanidzwa chinodomwa zvakanakisa. Izvi zvinoratidza kune vanoita zvemari kuti ari kushingairira kubudirira uye kuve mune bhizinesi remangwana. Akaisa mari yake pachezvake uye akawedzera yake kiredhiti kuvimbisa account yevatengesi yekutengesa pamhepo. Akatanga bhizinesi rake rese kuburitsa sechinhu chakaparadzaniswa kubva kwaari kubva paakangoisa ipapo, nekudaro zvinhu zvake hazviratidzwe kumabhizimusi uye kusungirwa - kunze kwechivimbiso chega cheakaundi yekutengesa, zvisinei isu tichakurukura. idzi misoro gare gare mugwara.
Sanganisa kweMauto Makuru Dziviriro
Mune zvimwe zviitiko, zvingave zvisina musoro kusabatanidzwa pamberi pechinhu chero chipi zvacho. Mumuenzaniso unotevera, uye mupfupi, kusanganisa kwakakosha chose.
MUENZANISO: Jim chiremba wepurasitiki, achivhura yake tsika. Iri basa rinomuvhurira masutu ekusashanda zvakanaka, chisungo chechigadzirwa (mune dzimwe nguva) uye zviuru zvekuratidzwa pakuve nezvinhu zvake zvakanangwa nemukweretesi akapihwa mutongo waipfuura iwo weinishuwarenzi. Kunyangwe iyo inishuwarenzi yakanaka, neruzivo, nyanzvi haigoni kupukunyuka dutu remutoro mumunda wakadai seuyu. Pano Jim anopinza Professional Corporation kuvhura maitiro ake matsva.
Hapana mumwe weiyi mienzaniso wainge wakafanana nehunhu, zvisinei unoratidza maitiro akafanana ekutora danho kana uchifunga kubatanidzwa. Kutanga kubva patakange tiine munhu anga achigadzira imwe mari achi shanda nguva yakazara, apo bhizinesi rake rakakura richipfuura zvikumbaridzo zvaida kuchengetedzwa kwemutoro uko kubatanidzwa raive danho rinotevera. Mumuenzaniso wechipiri takanga tiine muzvinabhizimusi uyo akaoneswa kusava nemhosva [zvakadaro] uye tikasarudza kuisa mutemo wekuparadzanisa zviri pamutemo, kuvimbika uye kutsigira zvinangwa zvake zveramangwana zvekukudza bhizimusi rinobudirira kuburikidza nemari yekudyidzana. Mumuenzaniso wekupedzisira tinotsvaga mamiriro ezvinhu apo kuiswa kwaingodiwa. Mamiriro ezvinhu matatu akasiyana kwazvo, zvisinei, ivo vese vakapokana nezvinhu zvekuisa bhizinesi, kuchengetedza mutoro, kudzikisira mutero, kuvimbika, kukwezva capital investor, nezvimwe.